Apple TV + share waa 3% marka ay noqonayso 2 sano | Waxaan ka imid mac
Saamiga Apple TV + waa 3% marka ay 2 jirsato
Sida sannad -guuradii labaad ee Apple TV +, tirooyinka saamiyada suuqa ee qulqulka cusub ee ay wadaagaan JustWatch waxay dhigtaa meel aad uga fog Netflix, Amazon Prime Video iyo Disney +. Marka loo eego tirooyinka JustWatch, Apple TV + kaliya wuxuu leeyahay 3% saamiga suuqa.
Tirooyinka ay soo aruuriyeen JustWatch place Netflix ayaa ugu sarreysa qiimeynta 28% saamiga suuqa ee rubuca labaad ee 2021. Amazon Prime Video wuxuu ku jiraa kaalinta labaad, isagoo leh 20%, halka Disney + ay leedahay 14%. Halkaas waxaan ka helnaa HBO Max oo leh 9%, Peacok (NBCUniversal) oo leh 4% iyo Apple TV + wuxuu ku xiraa darajada 3% saamiga suuqa.
In kasta oo Apple TV + ay madaxa ku dhufatay musmaarro taxane ah sida Ted Lasso, oo ku guuleystay abaalmarino aad u tiro badan, haddana weli waa barxad u muuqata inay u dagaallameyso meel ka raadso adduun taas oo saddexda waaweyni ay ka taliyaan fog. In kasta oo Disney + ay ku cusub tahay suuqa, baaxadda weyn ee buug -yaraheeda iyo sifooyinka cajiibka ah waxay u jeedday inay had iyo jeer caan noqon doonto.
Istaraatiijiyadda Apple ee kaliya ku tiirsanaanta waxsoosaarka ayaa aad halis u ah. In kasta oo xaqiiqda ah inta lagu gudajiray soo bandhigida wuxuu sheegay in Apple TV + lagu tilmaami doono tayo halkii laga tiro badnaan lahaa, xaqiiqadu aad bay uga duwanayd.
Qofna ma inkiro in tayada taxanaha laga heli karo Apple TV + ay wanaagsan tahay, si kastaba ha ahaatee, marka laga reebo Ted Lasso ficil ahaan ma jiro wax soo saarkii ugu weynaa ee Apple uu sharad ku lahaa tan iyo maalintii koowaad (Bandhigga Subax, ee loogu talagalay Dhammaan Aadanaha iyo Arag), ayaa goostay abaalmarinnadii Apple rajaynaysay.
Tusaalaha ahmiyadda sanduuqa kaydinta waxaa laga heli karaa Disney +, oo ah madal suuqa soo gashay maalmo kadib Apple TV + laakiin durbaba dhaaftay 100 milyan oo macaamiil ah, badiyaa sababtuna tahay asalka buug -yaraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Saamiga Apple TV + waa 3% marka ay 2 jirsato
Thunderbolt 5 wuxuu gaari karaa xawaare dhan 80 GB ilbidhiqsi kasta
Tilmaanlaha labaad ee taxanaha SEE oo hadda la heli karo